Ukujonga ukuKhangela kweTab kuGoogle Analytics | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 9, 2009 Douglas Karr
The ILayibrari yoNxibelelwano loMsebenzisi ye-Yahoo ine-tab elula yokulawula ekuvumela ukuba upapashe iphepha elinye elinomxholo odluliselwe kwiithebhu ezininzi. Ulawulo lusebenza ngokusetyenziswa kwoluhlu oluneebhulethi kwaye lubonakaliswe ngokukodwa kwi-divs.
usebenzisa google Analytics, Kulula ukongeza indlela yokulandela umkhondo wephepha kwithebhu nganye. Ngaphakathi kwinto ye-anchor kuluhlu ngalunye lwezinto, yongeza umcimbi onclick owongeza umbono wephepha kwi enembonakalo yenyani phepha.
Unokwenza umendo ngendlela ngaphakathi kwezicatshulwa nangona ungathanda.
Ukucoca iphepha phezulu, ndingatyhala kwakhona ukujongwa kwephepha kwithebhu emiselweyo xa iphepha livula okoko wonke umntu eza kujonga le thebhu xa kuvulwa iphepha. Unokwenza oku nge umthwalo onload event kunokuba umcimbi onclick isetyenziswe kwi-anchor (a) tag.
Sebenzisa imenyu yokuPhononongwa kweMxholo kwiGoogle Analytics kwaye ngoku ungaya kwiphepha lakho (okanye ucofe “iithebhu”) kwaye ujonge ukusetyenziswa kunye nokujongwa komxholo wakho wetheyibhile.
tags: I-ajaxkhokelela khokelaumthwalo onamandlaIifom zomxhuzulaneumthwaloamaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthaUkuqhubekeka kwentlawuloumquluuphawu lokubekisa lwentlaloukuhambisa iwindowiifom zegama lokucinezela
Ukungahoyi, ukulinganisa kunye nokugxila
Nov 15, 2011 ngo-9:56 PM
Nov 15, 2011 ngo-9:58 PM